Imikhiqizo Yezimali | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Ucabanga ukuvula i-akhawunti ye-iBroker? Lapha sichaza ukuthi uyini lo mdayiseli nokuthi yiziphi izinzuzo kanye nokubi.
Awuqinisekile ukuthi iyini i-DAX? Lapha sichaza ukuthi iyini le nkomba, yiziphi izinkampani eziyiqambayo nokuthi ibalwa kanjani, ukuze ungabi nokungabaza.
Izinzuzo zokuba ohola impesheni ngenxa yokukhubazeka ngokuphelele
Uyafuna ukwazi ukuthi yiziphi izinzuzo zokuba umuntu ohola impesheni ukuze ukhubazeke ngokuphelele? Zithole ngezansi.
Amasu Okusabalalisa Okuqondile Ngezinketho Zezezimali, Ingxenye 2
Incazelo yamasu athile athuthukile anezinketho zezimali ezingaphakathi kokusabalala okuqondile.
Uyazi ukuthi yiziphi izigaba zaphansi? Nokuthi imali obolekise ngayo ungaba nayo futhi ayikho emthethweni ngakho-ke bakubuyisele imali? Thola okuningi ngabo
Izinkampani ezinhlanu ezingabalulekanga ezizotshala imali ngo-Okthoba 5
Izinkampani ezingabaluleki ezinikezwa njengamathuba okutshala izimali avela emazweni ahlukene nasemikhakheni ehlukene.
Amasu anezinketho zezezimali, Ingxenye 1
Amasu anezinketho zezimali enye indlela yokutshala imali ekhona. Ukuchazwa kwezinye izindlela ezibalulekile
Ingabe uqinisekile ukuthi uyakuqonda ukuthi yini imali ebhange? Lapha sichaza ukuthi kuyini, kwenziwa kuphi nokuthi yiziphi izinhlobo ezikhona.
Siyini isizinda senqe
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi siyini isikhwama samanqe? Lapha sichaza ukuthi kungani banegama lelo, ukuthi basebenza kanjani nokuthi yiziphi eziseSpain.
Yini imali ebanjiswayo
Iyini ngempela imali ebanjiswayo? Iziphi izici onazo? Kunezinhlobo eziningi? Thola imininingwane oyidingayo ukuze uyiqonde.
Uyini imakethe eqhubekayo
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi imakethe eqhubekayo iyini? Lapha sichaza ukuthi kusebenza kanjani, yiziphi izinkampani ezenzayo, yiziphi amahora abo okuhweba.
Impesheni yomfelokazi: izidingo
Empeshenini yomfelokazi, izidingo yingxenye enzima kakhulu ukuyiqonda, ngoba kumele kuhlangatshezwane nayo nomufi nabahlomulayo.
Yiziphi izinketho ezinhle kakhulu zokutshala imali kwiNasdaq?
INasdaq Stock Market (iNational Association of Securities Dealers Automated Quotation) ibonakala ngokuba yimakethe lapho ...
Wazini ngempesheni yomfelokazi? Uma kuyisihloko ongenalo ulwazi oluningi ngaso, lapha sikukwazisa ngakho konke odinga ukukwazi.
Ukufaka isicelo semali mboleko kungenye yezinqumo eziyinkimbinkimbi kakhulu kwabanye abantu, hhayi nje ngoba kungukutshalwa kwemali okuhle ...
Udinga umshuwalense wemoto wenkampani? Yazi izinhlobo ezikhona ukwenza isinqumo esihle kakhulu sezimoto zakho.
Ucabanga ngokutshala imali ezimakethe zamasheya zaseChina? Lapha sichaza ukuthi iyini inkomba yayo namahora okuhwebelana kwase-Asia okunakho.
Ukukhulisa imali esiyongayo, kunenzuzo ukwazi ukuthi ziyini izimali ezihlanganyelanayo. Lapha siyayichaza futhi sikhulume ngokusebenza kwayo.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi luyini uhlelo lwempesheni? Thola konke odinga ukukwazi ngaye uma ufuna ukumqasha ngekusasa lakho.
Uyazi ukuthi uyini umshuwalense wesikweletu? Uyazi ukuthi isetshenziswa kuphi? Thola umqondo nayo yonke imininingwane okufanele uyazi.
Umehluko phakathi kweVisa ne-Mastercard
Ngabe i-MasterCard noma i-Visa ingcono? Ngokubheka ukuthi kungokokuqala ngqa kulokhu okukabili ukukhetha izinketho ukucubungula ikhadi, kufanele ukhethe yiphi?
Ukunquma ukuthi kunenzuzo yini ukutshala igolide kuyinto esingayithola uma sazi izimbangela zokujikisa kwayo. Ukwehla kwamandla emali, isisekelo semali kanye nokwehla kwamandla emali.
IMinnows vs Sharks: Icala leGamestop neReddit
UJanuwari 27, 2021 uzongena emlandweni njengenye yezinsuku eziyivelakancane emakethe yamasheya, ...
Incazelo yokuthi yiziphi izinketho zezezimali, ukuthi ama-Call and Puts asebenza kanjani, kanye nobungozi nezinzuzo ezibandakanyeka ekutshaleni imali nazo.
Incazelo yakho konke okuphathelene nokushintshaniswa kwe-forex. Kuyini, kuvela kuphi, kubalwa kanjani, nokuthi ungazuza kanjani kukho
Isikhwama sokutshala imali siyithuluzi lokuthola imbuyiselo kulokho okulondolozile onakho futhi ongadingi ukukusebenzisa. Thola okuningi.
Incazelo yezicupho ezingqondo zobuchopho bethu lapho sitshala imali. Ukuqonda ukusebenza kwengqondo kokutshala imali kusisiza ukuthi sigweme amaphutha futhi sithuthukise izinqumo
Incazelo yokuthi kumayelana nokuhlanganisa kabusha izikweletu, ukuthi ungakwenza kanjani, yini okulula kakhulu, nobubi obungabandakanya lokho.
Khetha phakathi kwesibambiso esingaguquguquki noma esiguqukayo, izinzuzo, okungalungile, nokuthi ungazi kanjani ukuthi yikuphi okuhle kakhulu ngokuya ngephrofayili yomthengi.
Thola umqondo wemalimboleko yomuntu siqu, umehluko nekhredithi, izici nemibhalo yokuyicela.
I-athikili yakhelwe ukwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo okufanele itshalwe kuyo, yini okufanele ibhekwe, kanye namaphrofayili ahlukene okutshalwa kwezimali
Izimali ezibanjiswa ngaphansi kwe-Subprime
Funda ngomlando wemali mboleko ye-subprime nokuthi umnotho wase-US (kanye nomhlaba) ucishe wawa kanjani.
Ikhadi lesikweletu noma ikhadi lasebhange. Thola ukuthi imuphi umehluko wakho kokubili ukukhetha eyodwa ekufanele kangcono ngokwecala lakho.
Uma ufuna ukwazi ukuthi i-akhawunti yokonga iyini, yehluke kanjani kwabanye, izici zayo, indlela yokuvula enye nokuningi, thola.
Kukhona ukuphepha okuthengwe ngokweqile lapho ungasusa khona izikhundla ukuze ubuye kamuva ngamanani aqinile.
INikkei yinkomba efanelekile yamasheya aseJapan, njengenye yezindlela ezingasetshenziswa ekutshalweni kwezimali ezimakethe zamasheya zaseYurophu. I-Nikkei I-Nikkei iyinkomba efanelekile yamasheya aseJapan, njengenye yezindlela ezingasetshenziswa ekutshalweni kwezimali ezimakethe zamasheya zase-Europe
Amakhasimende akwaSantander azokwazi ukuthola ukunikezwa okuyibhonasi yamaphuzu ayisisekelo afinyelela ku-100 ngentshisekelo eyehlukile kuye ngemikhiqizo.
Izitoko ezi-5 ezinamandla amakhulu kakhulu okwazisa
Amandla wokubuyekeza umehluko phakathi kwentengo eqondisiwe nentengo yamanje yefa lezezimali, ku ...
URussell 2000: okungaziwa kakhulu ngemakethe yamasheya yase-USA
Uyini uRussell 2000? Konke odinga ukukwazi mayelana nale nkomba yesitoko enezinkampani ezincane ezingama-2.000 ezinkulu ikakhulukazi ezivela e-USA.
Izindawo ezi-6 ezishisayo zemakethe yamasheya ezungeze amaholide
Ukubuya kwamaholidi kuzoletha uchungechunge lwamafu amnyama kubatshalizimali abazothola amanani ashibhile esitokisini.
Ithuba lokungena ezimakethe zase-Asia
Izitoko zase-US zihlangane ngokuqinile ngemuva kokuthengiswa okubangelwe yigciwane ngoMashi, oku…
Kungani iRapsol ingayeki ukwehla?
Uma i-Repsol ibonakala ngento ethile, kungenxa yokuthi ingenye yezinkampani ezinikeza amandla amakhulu wokubuyekeza, ngamazinga aphakathi kuka-5% no-15%
Izizathu eziningana zokutshala imali kusiliva
Ingabe isiliva kuwukutshalwa kwemali okuhle? Kungani umuntu kufanele ayithenge? Kungokwemvelo futhi kuqondile ukuthi umtshalizimali a ...
Ingabe yisikhathi se-Indian Stock Exchange?
Kunabatshalizimali abaningi abasezingeni eliphakeme abashaya izinzuzo zokukhiqiza zeNifty ebangeni lama-35% kuye kwangama-60 ...
UWarren Buffet uyifaka kuphi imali yakhe?
UWarren Buffett ungomunye wabantu abacebe kakhulu emhlabeni, onenani elifanele lama-80,8 billion ...
Ungayakha kanjani ingcebo ngokutshala imali?
Amasheya adayiswa ezimakethe zamasheya eziqokiwe (ama-stock exchange) njengeNational Stock Exchange (NSE) neStock Exchange ...
Ukutshala imali ku-VIX
I-VIX yikhodi ebizwa ngokusemthethweni iChicago Board Options Exchange Market Volatility Index (ngeSpanish: izinketho zemakethe yokuguquguquka kwemakethe ...
I-FTSE 100 yinkomba eyakhiwe yizinkampani ezinkulu eziyi-100 (ngosizo lwemakethe) ezibalwe ku ...
Kuzolulama kanjani emnothweni?
Kube nokuqagela okungapheli mayelana nohlobo lokuphindaphinda komnotho wase-US. Ngabe kuzoba ukululama okusheshayo esimweni ...
Ithuba lokutshala imali kwi-DAX yaseJalimane?
I-DAX, i-DAX 30 noma i-DAX Xetra yinkomba ye-blue chip stock yezinkampani ezinkulu ezingama-30 ...
Liyini inani lokutshala imali?
Kwizakhiwo ezithengiswayo, kunezinhlobo eziningana "zenani" elinikezwe impahla yangempela, konke okusebenzela…
I-Inditex esikhathini esibucayi sokutshala imali
Ukuthengiswa kwe-Inditex ngekota yokuqala yonyaka wezimali ka-2020 – phakathi kukaFebhuwari 1 no-30…
Ngabe ukutshala imali esikhathini esizayo sezimpahla kungenzeka manje? Yebo, kufanele kukhunjulwe ekuqaleni ukuthi ...
Faka imali ekuguquguqukeni
Uma izimakethe zamasheya zizibalula ngokuthile okwamanje, njengomphumela wemiphumela ye ...
Ungatshala kuphi kwikota yesithathu?
Akungabazeki ukuthi ukuwa okukhulu okwenzekile ezimakethe ngenxa yomphumela we-coronavirus une ...
I-United States Federal Reserve iqinisekisa inzalo ngo-0% kuze kube ngu-2022
I-United States Federal Reserve (Fed) ithathe isinqumo sokugcina amanani amanje asezingeni lomlando elingu-0% kuze kube ...
Izinto zokusetshenziswa: enye indlela yokutshala imali emakethe yamasheya?
Ngezikhathi zokungazinzi ezimakethe zezezimali, kunezinketho eziningi abatshalizimali abangakhetha ukuzenza zenze inzuzo ...
Imininingwane emangazayo yokuqashwa e-United States
Ngokumangazayo, idatha yokuqashwa yenziwe e-United States okungekho muntu owayelindele, ngisho ...
IDow Jones idlula izisekelo zesikhashana
IDow Jones ibonakaliswe ngezikhathi zokuhweba zakamuva ngokuphula izinga layo lentengo ngaphezulu ...
Ukutshala imali ezitokisini zeNikkei
INikkei 225, evame ukubizwa ngokuthi inkomba yeNikkei, iyinkomba yamasheya ethandwa kakhulu emakethe yaseJapan, yakhiwa yi-225 ...
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi nge-Standard and Poor's?
I-Standard and Poor's ingenye yama-indices akhombisa amandla amakhulu okwamanje nangaphezulu ...
Imakethe yamasheya iyinake impikiswano phakathi kwe-United States neChina
Esinye sezici esizothonya kakhulu ukuvela kwezimakethe zamazwe ngamazwe zokulingana ...
Uwoyela ungena ezikhundleni zabatshalizimali
Enye yezimpahla zezimali evuselelwe iphothifoliyo yokutshala imali kusukela ngoMashi ...
Ibex 35 ikhombisa ubuthakathaka obukhulu kunezinye izikwele
IKhansela laseJalimane u-Angela Merkel kanye noMongameli waseFrance u-Emmanuel Macron bethule 'Uhlelo Lokutakula' lweNyunyana ...
Ukuphuka kwegolide nesiliva kuphakeme
Igolide nesiliva yizimpahla ezimbili zezezimali ezigcina umfutho omkhulu okhuphuka ...
I-OHL ivuka ngamandla emakethe yamasheya
Ngokumelene nesibikezelo i-OHL ivuselelekile emakethe yamasheya yezwe lethu futhi ngesikhathi esilindelekile ngengxenye ...
Amabhange umkhakha okufanele uwagweme ngo-2020
Ingxenye yasebhange ingumkhakha omuhle kakhulu wezimali kusukela ubukhona bayo buheha ...
Imakethe yamasheya iseyindlela engcono kakhulu yokutshala imali
Naphezu kwakho konke, ukutshala imali ezimakethe zamasheya kuyindlela engcono kakhulu yokwenza ukonga kwakho kube nenzuzo, ikakhulukazi uma uya ...
Ngabe kugcinwa kanjani imali emalini engenayo engaguquki?
Ngaphakathi kwamasu okutshala imali kumabhondi, kufanele kuqashelwe ukuthi indlela otshala ngayo imali kuma-bond ku ...
I-Endesa neRepsol bathuthukisa imiphumela yabo ngesikhathi se-coronavirus
Kube nezinkampani ezimbili ezeqe obekulindelwe emiphumeleni yazo yebhizinisi ngekota yokuqala yonyaka e ...
UDuro Felguera: ukusabela kwe-chicharro
Elinye lamagugu elimangaze kakhulu ezinsukwini zamuva nguDuro Felguera kusukela ngenkathi kuqashwa ...
Amaresiphi wokuvula izikhundla emakethe yamasheya
Omunye wemiphumela okufanele sibe nayo yokuphahlazeka okwenzekile ezimakethe zamasheya emhlabeni jikelele ...
Yiliphi ikhadi elifanela indlela oyisebenzisa ngayo?
Ikhadi lesikweletu noma lasebhange? Lowo ngumbuzo esivame ukuzibuza wona lapho sikhetha ...
Ingabe imali yesikhathi eside ikufanele?
Kuma-deposit wesikhathi eside, akukho ukukhushulwa okugxila kakhulu kubasebenzisi, yize kunalokho, amanani wenzalo ephansi awaphakeme kakhulu.
Izofinyelela nini i-Ibex 35 ezingeni lamaphoyinti angama-8000?
I-European Central Bank (ECB) iphinde yabonisa ukuthi izimisele ukusiza ezomnotho ...
Ukuziphatha kwezimpahla ezehlukene zezezimali ngesikhathi senhlekelele
Izintengo zezinkomba zomhlaba ngoMashi ziveze isimilo esiphambene kulezi zinhlaka ezimbili ezifanayo. Ngenkathi…
Yimiphi imikhakha ene-bullish kakhulu?
Ukwehla kwamandla omnotho emhlabeni jikelele, eYurophu nakanjani eSpain kungena ngokuphelele kuma-panorama ezinkampani ezibalwe ku ...
Isikhathi sesifikile sokutholakala kwezindleko zokutshala imali futhi leli qiniso lingavela ezigabeni ezahlukahlukene ...
Ukuthenga ikhaya kungumsebenzi obaluleke kangako empilweni yakho ukuthi ngeke ukwazi ukushiya isikhala sokuvuselelwa. Uma kungenjalo yonke into Ukuqasha isikweletu sendlu kungumsebenzi obaluleke kangako empilweni yakho ongeke ukwazi ukushiya isikhala ezandleni zokuhlaziywa
Ubuchwepheshe buyaqhubeka, ngaphandle kokungabaza, umkhakha oqhubeka nokukhombisa amandla amakhulu. Kuze kube seqophelweni lokuthi ...
Amabhange: I-OPAS, amahemuhemu nemiphumela emibi
Imakethe yamasheya iyaqhubeka nokuba ithuluzi elibi lokuphepha komkhakha wamabhange ngemuva kokunwetshwa kwe-coronavirus futhi vele ...
Inani eliphephile: igolide ekuphakameni kwalo kweminyaka eyisikhombisa
Uma kukhona impahla yezezimali egcina ukuthambekela okucacile okuphezulu ngenkathi kunwetshwa i-coronavirus, akuyona enye ngaphandle ...
Yiziphi izimakethe zokulingana ezinhle kakhulu ongatshala kuzo?
Izilinganiso zezimali zaseSpain, zaseYurophu noma zase-United States. Lokhu futhi kuyinkinga abaningi ...
Ungayakha kanjani uhlelo lwempesheni olwenzelwe wena?
Mayelana nesikhathi eside, ama-Individual System Pension Plans abhalisa inzuzo emaphakathi ngonyaka engama-3,26%
Izibopho zombuso waseSpain zisengozini
Ukuzinza kwezibopho ezizimele zaseSpain yinto ejwayelekile eye yagcinwa eminyakeni yamuva
Imikhuba yethu yansuku zonke nobudlelwano noma isimilo ekutshalweni kwemali kushintshiwe yizinyathelo zokuboshwa ezisetshenzisiwe ...
Enye yeminikelo yezimali emakethe yamasheya ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokuqapha kwabo okufika ngesikhathi ngoba akusikho ukuqagela.
Akuyona yonke into ezoba yizindaba ezimbi zezimpahla zezezimali esikhathini sodlame olwandile. Futhi okuhle ...
Yimalini efiselekayo ukutshala imali ezimakethe zamasheya?
Ukufika kwe-coronavirus kudale ukwehla kwamanani wamasheya athengiswa ezimakethe ze ...
I-ACS ibuyile kusuka ekuphakameni kwayo maphakathi no-Mashi ngama-20% angaphezulu nje. Uku…
Imali ebanjiswayo ingumkhiqizo obaluleke kakhulu ezimpilweni zabantu kangangokuthi ngeke ishiyelwe ekuvuseleleni. Akumangalisi ukuthi imali iningi Okuqukethwe ezindlekweni kungaqhamuka ezigabeni ezahlukahlukene futhi kungaholela ekubanjisweni kwemali eshibhile emazingeni angama-20% kubhajethi yakho yokuqala
Ama-akhawunti akhokha kakhulu angenye yezindlela ezizuzisa kakhulu ukuthola imbuyiselo egculisayo.
Izinkokhelo zeselula ezivela emabhange
Ezinye zezicelo eziningi ezingasetshenziselwa izinkokhelo zeselula sezivele zitholakala ezikhungweni zezikweletu.
IAG nezindinganiso zokuvakasha: ukuba noma ukungabi semakethe yamasheya
Uma kuzoba nomkhakha othintekayo enkingeni yezomnotho obangelwa ukwanda kwe-coronavirus ukuthi akukho ...
Izimakethe zilinde izinyathelo ezintsha zezomnotho e-EU
I-Eurogroup isebenza ngezindlela zezomnotho zokubhekana nenkinga ye-coronavirus ebandakanya ukusebenzisa ...
5 amanani aqinisekisa inkokhelo yesabelo
Sisesikhathini lapho abatshalizimali bebheka ukuthi bazozilanda yini izabelo zabo ngenxa yempophoma ...
Ingabe isikhathi sokuthengisa izimali zethu zokutshala imali?
Ngokwesimo sokungaqiniseki okuphezulu, nangokuntengantenga okwedlulele ezimakethe, izimali zokutshala imali ziye zahlangabezana ...
Ukudalulwa kungumsebenzi ophethe lapho kulawulwa khona ukuthengiswa kwempahla enesibambiso ngenxa yokwehluleka komuntu okweletayo.
Sisesimweni semakethe ngokungagwegwesi futhi okunye ukungabaza okuvelayo njengamanje ukuthi ngabe ...
Amasu achazwe kahle ngemuva kokuphahlazeka kwemakethe yamasheya
Ngenkathi abanye abahlaziyi bezimakethe zezimali bebhekise eqinisweni lokuthi amanani wamasheya alinganisiwe, ...
Ukuphahlazeka okuphelele ezimakethe zamasheya emhlabeni jikelele
Ukunyakaza okunjalo akukaze kuthuthuke ezimakethe zokulingana emhlabeni jikelele. I…
Ukushintsha kwamanani kwezinye izibambiso ze-Ibex 35
Omunye wemiphumela ngokuvela kwe-coronavirus ukuthi amanani amasha akhiqizwa kumanani ...
5 amanani lapho ungafanele ukuba khona
Ukubuyiswa kwamasheya eSpain kwakucishe kube ngu-19% ngezikhathi ezinhlanu zokuhweba. Kepha…
Amakhredithi okutshalwa kwezimali: ingabe ayakufanelekela?
Kuya ngokuya kuvame kubatshalizimali abasebancane ukuthi bacele imalimboleko yokutshala imali ukuze benze imali yabo emakethe yamasheya.
Yakha iphothifoliyo yokutshala imali ngokufunda emaphutheni
Isifundo sabatshalizimali okufanele basifunde ekuweni kwezimakethe zamasheya njengomphumela ...
Ezinye izabelo zincishisiwe ezinye zimisiwe
Okunye okusatshiswa kakhulu ngabatshalizimali ukuthi izabelo zezinkampani zizoncishiswa noma ...
Kuyini ukutakula ku-V, U noma L?
Akungabazeki ukuthi impendulo yezimakethe zokulingana emhlabeni wonke izoncika ku ...
I-SOS: ukuxilongwa kwezimakethe zokulingana
Kunamasheya ambalwa kakhulu ezimakethe zamasheya azisindisayo kulokhu kudonsa kwangempela ku ...
Amanani ama-5 athinteka kakhulu yi-coronavirus
Yiziphi izibambiso ezivikela kakhulu emakethe yamasheya?
Elinye lamasu okubhekana nezikhathi ezinzima ezimakethe zamasheya kusekelwe ekwenziweni kwephothifoliyo yokutshala imali enamanani okuzivikela noma okulondolozayo.
Ukukhokha ngokheshi noma ngekhadi
Ukukhokha ngamakhadi kuwumkhuba osekusele ukuthi kube khona futhi sekukhona amazwe lapho ukunyamalala kwemali kuyinto yangempela.
Amasheya ayi-7 enze kangcono ezimakethe zokubulawa kwabantu
Ngalesi sikhathi izikhali ezisindayo zeFederal Reserve (Fed) ne-European Central Bank (ECB) azikwazanga ...
Ingabe iphansi le-Ibex 35 lithembekile kumaphoyinti angu-6.100 XNUMX?
Kubukeka sengathi izinga lamaphoyinti angama-6.100 lingahle lisebenze njengomhlabathi kunkomba yemali ekhethiwe ...
Ungayithuthukisa kanjani imisebenzi yokuthengisa emakethe yamasheya?
Imisebenzi egcina inqume impumelelo noma cha yotshalomali emakethe yamasheya yenziwa ngokusebenzisa ...
Ukuphahlazeka kwemakethe yamasheya: amasheya azophendula kanjani kusukela manje?
Kungukuphahlazeka okugcwele emakethe yesitoko. Le yindlela abahlaziyi bezezimali abachaza ngayo isimo samanje se ...
Azikho izitezi ezikhwameni zawo wonke umuntu
Amabhange amakhulu eCanada, eJapan. INgilandi, iSwitzerland, i-United States Federal Reserve kanye ne-European Central Bank kumemezele ...
Ngabe izinyathelo ze-alamu ye-coronavirus zibathinta kanjani abasebenzisi bebhange?
Isimo sokwethuka izakhamizi ezidlula kuzo siyathinteka ebudlelwaneni bazo nezwe le ...
Ungayonga kanjani imali lapho uhweba emakethe yamasheya?
Enye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali emakethe yamasheya akukhona nje kuphela ukwenza inzuzo ngokulondoloza kwabo. Kepha futhi nokwandisa ukusebenza kwakho ...
Kwenzeka nini ukubhampa nokuthi ungakuhweba kanjani?
I-rebound iyisikhali esitholakala kubatshalizimali ukukhawulela ukulahleka kwabo futhi ngaphandle kokucabangela ama-oda wokulahleka kokuyeka.
Ukuthengisa okuphambili kumisiwe: yini abatshalizimali abangayenza lapho bethuka?
Uma abatshalizimali bengakazilahli izikhundla zabo kuze kube manje, akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokubekezelela imvula….
Abaphumelele nabaphumeleli ngokwehla kwamanani e-US.
Ukwehliswa kwezinga le-Fed lamaphuzu ayisisekelo angama-50 kusho ukunyakaza okusha ezimakethe ze ...
Naphezu kwakho konke, izici ezi-5 ezinhle ukuthi i-coronavirus isishiya sitshale imali
Kuyiqiniso ukuthi ukwethuka kubambe ukunyakaza kwabatshalizimali abancane nabaphakathi nokuthi ...
Yenza ingozi yokulahlekelwa yi-uptrend
I-Acciona ibingenye yamagugu asezingeni eliphakeme kakhulu ezimalini zaseSpain nokuthi kulo nyaka ibisilinganise cishe ngama-13%.
Izitoko ezi-7 ezithuthukise isivuno sezabelo
Isivuno sesabelo sithuthuka ngokuncipha emakethe yamasheya ngemuva kokuthi i-Ibex 35 ifinyelele ...
Ukutshalwa kwezimali okusha kwedijithali: iLibra
I-Facebook yezobuchwepheshe, umnikazi wenethiwekhi yokuxhumana enegama elifanayo, ukugcizelele ukuthi ingase yethule imali yayo entsha yedijithali, iLibra, ezinsukwini ezizayo.
Izithiyo ezinkulu zezikhwama zokubuyela phezulu
Akekho ongabaza ukuthi ukuwa emakethe yamasheya ezinsukwini zokugcina zikaFebhuwari kube nesihluku. Kuze kube…
Ercros ithuba eliphakeme
I-Ercros ingesinye sezibambiso ezincane neziphakathi nezimali ezinkulu ezinomthamo omkhulu kakhulu wezivumelwano ngenxa yokuthi ...
I-coronavirus ifaka ukungazinzi emakethe yamasheya: yini okufanele uyenze?
Ukuguquguquka umqondo wokuthi abatshalizimali kuzodingeka baphile nawo, okungenani engxenyeni yokuqala ye ...
Indawo yokuhweba: lapho ungavula khona izikhundla
Asikwazi ukukhohlwa ukuthi imisebenzi yokuhweba ayilula kakhulu futhi idinga imishini yezobuchwepheshe ebalulekile ekukhuleni kwayo.
Ukufika okukhulu emakethe yamasheya kuzofika nini?
Kubukeka sengathi kuyindaba yesikhathi, kepha ukuguqulwa kuzofika ngokushesha kunakamuva. Ngoba akukho okuvuka kuze kube phakade, ...
Izimpahla zebhange le-piggy ezimakethe zezimali
Lezo zinhlobo zokutshalwa kwemali ezenza imbuyiselo encane minyaka yonke zibizwa ngezokuphepha noma izimpahla zezimali i-piggy bank, ...
Yimaphi amanani azohlomula ngokuvela kwemoto kagesi
Ukubhaliswa kwezimoto ezisebenza ngogesi eSpain kuvale i-2019 ngenani lamayunithi angama-24.261, kufaka phakathi izimoto zabagibeli, ezentengiselwano kanye ...
Isivuno sokwahlukaniswa siyathuthuka ngokuncipha kwemakethe yamasheya
Izabelo ezivela emalini yaseSpain ziphakeme kakhulu ezitezi zokuhweba zomhlaba wonke futhi yizo ezinikela ...
Ungawuthola kanjani umshuwalense wamahhala?
Umshuwalense ungumkhiqizo ezimeni eziningi kubalulekile ukuthi uzivikele ezimweni ezingafuneki.
Kuthiwani uma kuba nokwethuka ezimakethe zamasheya zomhlaba?
UMsombuluko omnyama ezimakethe zokulingana emhlabeni jikelele ngenxa yokwanda kwe-coronavirus. Konke…
Izinkomba eziyinhloko zokuhweba emakethe yamasheya
Unamasu nezinkomba ezahlukahlukene zemakethe yamasheya ezingakunika izixazululo eziningi zezidingo zakho emkhakheni wokutshala imali.
Yisiphi isikhwama sokutshala imali okufanele ngisikhethe?
Izimali zokutshala imali zingenye yemikhiqizo ekhethwe ngabasebenzisi ukuhambisa imali abayongele ...
Izintela ezixhunyaniswe nezinto zokusetshenziswa
Akungabazeki ukuthi lesi sigaba samadiphozi asebhange wesikhathi esinqunyelwe singenye yamafomethi okuqala kakhulu atholakalayo njengamanje.
?? Enye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali ukuvula izikhundla kwizibambiso ezingenza kangcono kunezinye…
Kubonakala sengathi bobabili u-Endesa no-Iberdrola bafinyelele engxenyeni yabo ephezulu kakhulu yesiteshi sabo senkomo. Kepha kuyabonakala ...
Ukuvula i-akhawunti phesheya kungakunikeza izinzuzo ezithile kumikhiqizo enenkontileka, enamamayela wokungenelela athe xaxa.
I-Ferrovial, ngesinye sezitoko ezihamba phambili ku-Ibex 35
Elinye lamasu okutshala imali ngalesi sikhathi lifaka phakathi ukugcina iFerrovial kuphothifoliyo yezokuphepha engxenyeni yokuqala yeNye yamasu okutshala imali ngalesi sikhathi ifaka phakathi ukugcina iFerrovial kuphothifoliyo yezokuphepha esikhathini esizayo. Isigamu sesibili salo nyaka
Amaleveli lapho ungathenga khona
Ukuthengwa emakethe yamasheya kungenye yezikhathi ezinqumayo kakhulu abatshalizimali abanazo kusukela kulo msebenzi ...
Izitoko eziyi-8 eziphule ukuxhaswa noma ukumelana
Ukwesekwa kuyizinga lentengo ngaphansi kwaleli lamanje, futhi lokho kubonakala uma kuqhathaniswa nezinye izibalo ezinezici ezifanayo ...
Azoba yini amanani okuphephela ngo-2020?
Impi yezohwebo phakathi kweChina ne-United States, ukungezwani eMiddle East kanye nezingozi zokhetho eMelika ...
Ukutshalwa kwezimali ezinkampanini emkhakheni we-Intanethi
I-Internet Yurophu iyinkomba eqoqa amakhotheshini ezinkampani ezinkulu kulo mkhakha wezobuchwepheshe ezwenikazi elidala.
Ukwehla kokungahluziwe kuthinta kanjani imakethe yamasheya?
Intengo kawoyela waseBrent isebenze kumadola angama-54,78 emgqonyeni, ilahlekelwe - 1,62% kuqhathaniswa ne ...
Ingabe yisikhathi sokubuyela ezimakethe ezisafufusa?
Esinye sezici zezimakethe zamasheya okuthiwa ziyavela ukuthi zingavumela inzuzo enkulu ekuthengeni nasekuthengiseni imisebenzi.
Imikhakha emakethe yamasheya yaseSpain ethinteke kuhulumeni omusha
Sekuvele kunohulumeni omusha eSpain futhi kunemikhakha eminingi efakwe kuhlu ezimakethe zezimali ezizolinyazwa futhi zizuze.
8 amanani anengozi enkulu ngo-2020
Ukuvikelwa ekusebenzeni ezimakethe zezimakethe zamasheya akukho okungcono kunokuvezwa kwamavelu angakwenza kangcono.
Wonke amanani omkhakha wezokuvakasha alungisa amanani abo emakethe yamasheya
Isimo esibucayi semakethe yamasheya esibangelwe i-coronavirus sinesisulu esicacile ezimakethe zamazwe ngamazwe zokulingana….
Izinzuzo nobubi bezinto ezidayiswayo
Kumele kuqashelwe ukuthi okuphuma kokunye kungumkhiqizo wezezimali obonakala ngaphezu kwakho konke ngokusebenzisa kwawo ngokweqile.
Kungani i-Ibex 35 isalelene nemakethe yamasheya yase-Europe?
Enye yemininingwane ekhombisa ukuvela kwezimpawu eziyinhloko ze-European equity ukuthi ...
Vuka imakethe yamasheya yaseSpain noma ukukhuphuka kwamanga
I-Ibex 35 ivalwe ngesonto eledlule ngokukhuphuka ngo-0,50%, okuholele ekutheni amanani ayo abe sezingeni eselivele lisondele kakhulu kumaphuzu angama-9.200.
I-Aena isondele kakhulu kuma-euro angama-200
Kubonakale kungenzeki ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kepha iqiniso ukuthi u-Aena usevele usesimweni sokuhlasela umgoqo wama-euro angama-200 ngesabelo ngasinye.
Ingabe amasheya asalele kakhulu kufanele athengwe emakethe yamasheya?
Ukuthenga amasheya asalele kakhulu emakethe yamasheya isu elihlose ukuzuza kulokho kuvikeleka okwenze kabi kakhulu.
Inkinga kuphela ozoba nayo ukuthola la mathuba okuthenga nawamabhizinisi nokuthi ungawasebenzisa ukuze wenze imali ibe nenzuzo.
Amanani ahlaselwa kakhulu emakethe yamasheya yigciwane laseChina
Igciwane laseChina libuye lashaya abatshalizimali kuleli sonto ngokuthinta kabi izimakethe zokulingana ...
Ukutholakala kwemali ye-FED ne-ECB kuvula indlela yethemba ezimakethe zamasheya
Okubukeka kungacabangeki emasontweni ambalwa edlule sekuyinto engokoqobo: ukuqothuka kweFed ne-ECB kuvule indlela yokwenyuka okwengeziwe.
Akungabazeki ukuthi iNetflix efakwe ohlwini ibingenye yezokuphepha okunikeze umdlalo omkhulu kunawo wonke ...
Akungabazeki ukuthi omunye wemikhakha ezotshala imali ku-2020 yibhange ngenxa yokwenyuka kwalo ezinyangeni ezedlule.
Ukutshala imali ezintweni ezingavuthiwe
Izinkampani ezigxile kulezi zinto zokusetshenziswa zihlukaniswa ngaphansi kwemigomo emibili okufanele ibhekwe ngesikhathi sokuqashwa.Izinkampani ezigxile kulezi zinto zokusetshenziswa zihlukaniswa ngaphansi kwemigomo emibili okufanele ibhekwe ngesikhathi sokuqasha.le mikhiqizo yezezimali
Ungayivikela kanjani imali yabantu abazisebenzayo?
Ingxenye enhle yezinkampani zomshuwalense inikela kwabazisebenzelayo ithuba lokubhalisa inqubomgomo yokukhubazeka okuphelele kwesikhashana.
I-OHL ithokozela ama-40% ngenyanga yokuqala yonyaka
Uma kunenani le-bullish okwamanje kuma-equities aseSpain okungekho okunye ngaphandle kwe ...
Ungakusakaza kanjani ukuthengisa ngesikweletu?
Ukuthengisa ngesikweletu kuyimodeli esuselwa eqinisweni lokuthi ungazuza ekwehleni kwezimakethe zamasheya emhlabeni jikelele.
Yimiphi imigomo yokuhlala unomphela ongayikhetha emakethe yamasheya ka-2020?
Iqembu libukeka lisafakwa ezimakethe zezimali, ikakhulukazi e-United States ...
Ukunqoba Izibambiso Nemikhakha Ngonyaka Odlule
Akunakulibaleka ukuthi kube nochungechunge lwamagugu aphume enqobile onyakeni odlule, nokwazisa okufika kuma-50%.
I-Ibex 35 ilinde ukudlula amaphuzu ayi-10.000 XNUMX
Isinxephezelo esenzeke emavikini amuva enkombeni ye-equity equity index, i-Ibex 35, sikuholele ekutheni kuvivinywe indawo enamaphuzu angama-9600.
Ence elinye lamanani ashisayo kulo nyaka
I-Ence ingesinye sezibambiso ezisebenza kakhulu ezinyangeni ezisanda kwedlula kanti ingxenye enkulu yabatshalizimali abancane nabaphakathi isalindile.
Ukuphepha okungu-6 okunenzuzo engcono kakhulu
Kukhona abatshalizimali abasekela isu labo ekutshaleni imali ezinkampanini ezinenzuzo ephezulu yezabelo efinyelela kuma-9%.
Amasu ama-5 wokwenza ngcono inzuzo ekutshalweni kwemali emakethe yamasheya
Intengo eshibhile yemali, ngenxa yesinqumo se-European Central Bank (ECB) sokuthwala ...
Kusukela manje, ezinye izimpahla zezezimali ezithakazelisa kakhulu zibonakala zivula izikhundla futhi zilungiselela iphothifoliyo yethu elandelayo yokutshala imali.
Enye yezinzuzo zezimali zokutshala imali ezincike ezimakethe zokulingana ukuthi ...
Imininingwane emisha ye-macro emnothweni waseSpain ikhombisa ukuthi ukuphola kwayo kuyinto yangempela futhi kuthinta izimakethe zamasheya.
Elinye lamathuluzi abatshalizimali abancane naphakathi abanakho ukwenza imisebenzi yabo lenziwa ngomshini oscillators.
Ukuhamba emakethe kawoyela
Enye yezindlela ezizuzisa kakhulu abatshalizimali abangazisebenzisa ukuqeda izimali zokutshala imali ezisuselwa ku-oyela.
Amasheya ahlukahlukene angenza kangcono ku-2020
Enye yezinhloso zabatshalizimali ukubhalisa izibambiso ezizosebenza kangcono kunezinye.
Ukungqubuzana phakathi kwe-US ne-Iran kuthinta kanjani imakethe yamasheya?
Ukuqala konyaka omusha kusilethele izindaba ezimbi kubatshalizimali ezifana nengxabano phakathi kwe-US ne-Iran futhi lokho kuholele emakethe yamasheya e-bearish.
Izinzuzo nezinkinga zezimali zemali
Izimali zemali zenziwa ngezakhiwo izimpahla zazo ezakhiwa amathuluzi emali engenayo yesikhashana, okungenani izinyanga eziyi-12.
Izimpawu zokuqala zobuthakathaka kwa-Endesa, noma kungukukhohlisa?
Umkhakha kagesi uzoba ngenye yalezo ezingashintsha kakhulu kulo nyaka wemakethe yamasheya, ikakhulukazi amasheya akwa-Endesa.
Kufanele ube nezikhundla ezivulekile ngegolide
Enye inketho onayo ngaphakathi kwegolide yi-ETFs, okuyingxube phakathi kwezimali zokutshala imali nokuthengwa nokuthengiswa kwamasheya emakethe yamasheya.
Izimakethe zamasheya eYurophu
Kukhona impilo engaphezu kwenkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya yaseSpain, i-Ibex 35 ngokusebenzisa olunye uchungechunge lwamanani ezimakethe zamasheya zaseYurophu.
Ama-Telecos abuyela kwi-radar yabatshalizimali
Kwase kuyisikhathi eside selokhu kwaba khona amasheya amathathu avela emkhakheni wezingcingo ezinkombeni ezikhethiwe zezimali zaseSpain, i-Ibex 35.
Amanani ayi-7 akhulisa isabelo sawo ngo-2020
Ungakhetha izinkampani ezifakwe kuhlu ezinikeza isabelo ngaphezu kwe-7%, okungenye yezindawo eziphakeme kakhulu ezilinganisweni zezwekazi elidala.
Ingabe kufanelekile ukungena esikweletini ukuze ubhalise imali ebanjiswayo?
Kushintshwa imikhuba yokuqasha njengoba kunenkambiso yokuqashwa kwemali ebolekiswe ngemali eholile.
Ngabe ama-deposit wesikhathi eside afana nani?
Imali yesikhathi eside, ngenxa yezici zayo ezikhethekile, yenziwa kakhulu njengomkhiqizo wokonga kunomkhiqizo otshaliwe.
Lezi zinkampani ziqala unyaka ngezindaba ezintsha
Akukho okungcono njengokuthola izindaba ezintsha ezinkampanini ze-Ibex 35 zokuba nemingcele eminingi yokwenza elinye isu lokutshala imali.
Izimpawu zokungena noma zokuphuma emakethe yamasheya
Enye yezinhloso abatshalizimali abaningi abanayo ukuthola amasiginali amahle kakhulu ukuze bakwazi ukungena noma ukuphuma ezimakethe zezimali.
Amanani okuphepha aphephile ekuwohlokeni komnotho
Kuyithuba elihle lokuhlaziya ukuthi yiziphi izibambiso noma izimpahla zezezimali ezingasebenza njengesiphephelo ezinyangeni noma eminyakeni ezayo
Izinhloso ezizocatshangelwa ngo-2020
Enye yezinhloso kulo msebenzi olandelayo ukuhlola izimakethe kuze kube manje osuzikhohliwe kumasu akho okutshala imali.
Amanani awele ngaphezu kuka-50%
Akukho lutho olubi kakhulu ezimakethe zamasheya kunokumiswa esitokisini esilahlekelwe cishe konke ukulinganiswa kwemakethe yamasheya.
2020: unyaka wokuvuselelwa?
Amandla aluhlaza, avuselelekayo asuke ekubeni yi-utopia aya kwesinye seziphakamiso ezinenzuzo enkulu ezimakethe zezimali.
Ukuthenga ekuqaleni konyaka ukuphepha okwenze kabi kakhulu ngonyaka owedlule kungaba isu lokutshala imali ngo-2020.
Mhlawumbe abatshalizimali abaningi abazi ukuthi izimali zokutshala imali zingazenza zibe semthethweni kwezinye izimali ngaphandle kwe-euro, njengedola.
Ukuze usebenzise lawa ma-akhawunti wokuhweba axhaswe ngemali, umsebenzisi kufanele athathe isifundo lapho, phakathi kwezinye izifundo, imithetho ichazwa.
Tshala imali emakethe yamasheya eGreat Britain, ngani?
Ukushintshaniswa kwamasheya eGreat Britain kugcina izici ezithile ezidinga ukunakekelwa uma kwenzeka uzokwenza ukusebenza kwalezi zici.
Isikhathi esibi semidiya yokubukwayo nokubukwayo emakethe yamasheya
Uma kunomkhakha wamasheya ongahambisani nezikhathi zawo ezinhle, lokho akuyona enye ngaphandle kwalowo omelwe yimidiya yezindaba ezibukwayo.
Abatshalizimali abakhulu abakhohliwe baseSpain
Umthamo wokuhweba yilona onquma ngandlela thile okuyizindinganiso ezikhohliwe zezimali zaseSpain
IMapfre imemezela 'isexwayiso senzuzo' futhi amasheya ayo awela emakethe yamasheya
IMapfre iqede usuku lwalo Msombuluko ngokuwa okucishe kube ngu-4%, ngemuva kokumemezela ukuthi kuzofanele ibuyekeze izinhloso zezezimali.
Amaqhinga okwenza imisebenzi enenzuzo emakethe yamasheya ekupheleni konyaka
Lokhu kungaba imisebenzi eshesha kakhulu ngenhloso yokwenza imisebenzi izuze esikhathini esifushane kakhulu.
Ungahlukanisa kanjani iphothifoliyo yesikhwama sokutshala imali?
Esinye sezihluthulelo zokungabi nephutha kulolu hlobo lokutshala imali ukwenza okwehlukile ekusebenzeni.
5 amasheya emakethe yamasheya aseSpain angazange ahlupheke ukusika kusukela ekwindla
I-Endesa yethule imiphumela emihle kakhulu phakathi kukaJanuwari noJuni 2019, ngenxa yokuphathwa kahle kwemakethe ekhululekile.
Shintsha kuzabelo ezisatshalaliswe ngabakwa-Endesa
I-Endesa izokhipha 'ukukhokhela kwayo' iye kuma-70% ukuxhasa iphrofayili yayo yokukhula futhi izinikele ekukhuthazeni okuvuselelekayo, inikele ngo-100% kuze kube manje.
Yiziphi imikhakha eyinhloko yemakethe yamasheya aseSpain
Ngesikhathi sokwenza utshalomali lwakho enye yezinto okufanele uzibheke yimikhakha ozoqondisa kuyo yonke imali oyongile.
Ukutshala imali ngoDisemba ngaphandle kokuba semakethe yamasheya
UDisemba inyanga ekhangayo ezimakethe zezimali, kodwa uma nganoma yisiphi isizathu ungafuni ukuziveza kulezi zimakethe zezezimali.
Thola kabusha izinzuzo
Izinhlelo zokutshalwa kwezabelo kabusha zivumela ukuthengwa okuzenzakalelayo kwamasheya amasha, ngaleyo ndlela kwandise ibhalansi yamasheya.
Izeluleko ezi-6 zokugxila kutshalomali ngo-2020
Lo nyaka osuzoqala, ngeke kube lula ukuhambisa izimali ngendlela efanele, kepha kunalokho, kugcwele izithiyo.
USniace uzama ukwelulama: uzophumelela?
Ukuze isici sobuchwepheshe se-Sniace sithuthuke, olunye lwalezi zimpawu lwenziwe ngokuthi lukwazile ukunqoba ukuphakama kokugcina okwehlayo.
Ezinye izindlela emakethe yamasheya: ezinye izinhlobo zokutshala imali
Kunamanye amamodeli wokutshalwa kwezimali ngesikhathi lapho imakethe yamasheya ingasasizakali ngemali yethu lapho kuba noshintsho kumkhuba.
Ukwenza imisebenzi ye-ATM iphephe kakhulu, amabhange aklame amakhadi wesikweletu aphephile
5 amanani wokuthula ngo-2020
Kukhona uchungechunge lwezibambiso esingachitha kuzo ngokukhululeka kulo nyaka ngoba ukungazinzi kwazo kungenye yezinto eziphansi kakhulu emakethe kazwelonke eqhubekayo
UDisemba inyanga ehamba phambili ngokusebenza kahle kwemakethe yamasheya yaseSpain
Phakathi kwemijikelezo eya phezulu evame ukuziphinda, uDisemba inyanga enhle kakhulu ukuthatha izikhundla emalini yaseSpain.
Amahlebezi okuthengiswa kwe-Endesa kubatshalizimali baseChina
Amahemuhemu avela ezinhlokweni zezindaba zedijithali: "U-ENEL ufuna ukuqeda i-Endesa", egcwalisa abatshalizimali ngokungabaza.
I-Oryzon ingaba yisembozo sesikhwama saseSpain
I-Oryzon ingaba enye yezinkampani ezinokumangala okuhle ngonyaka ozayo ezimakethe zezimali zaseSpain.
Ngabe imakethe yamasheya yaseMelika ingaqhubeka iye phezulu?
Abekho abahlaziyi abambalwa abanethemba lokuthi imakethe yamasheya yase-US isikhuphukile noma isondele kakhulu kulesi simo futhi sizokwazi kungekudala.
Anjani amadiphozithi ongawathola ngenkontileka?
Omunye wemikhiqizo yokonga ngokusezingeni eliphezulu yimali efakwa ebhange yesikhathi esinqunyiwe, kepha okwamanje inzuzo yabo ephansi iphikisana nabo.
Yini okufanele uyenze esimweni sokwehla kwamahhala?
Ukwehla kwamahhala yisibalo esibi kunazo zonke esingakhiwa kumanani, phakathi kwezinye izizathu ngoba asisekeli izisekelo ngaphansi.
Yimaphi amanani aholela ekukhuphukeni noma ekulahlekelweni emakethe yamasheya?
Njengoba kungahlaziywa, akuwona amanani afanayo ngaso sonke isikhathi aholela ekukhuphukeni, noma esimweni sabo lawo alahlekelwa kakhulu ezimakethe zezezimali.
Okuqondiwe ngamanani ezabelo ku-Ibex
Yize amathemba e-Ibex engewona amahle ngokweqile, anamandla wokubuyekeza athakazelisa kakhulu.
Izenzo eziyi-9 okufanele uzigweme emakethe yamasheya
Amasu amakhulu emakethe yamasheya athuthukiswa ukugwema izenzo ezingadingeki ekusebenzeni okuqhutshwa kulezi zimakethe zezezimali.
Izinyathelo okufanele zithathwe lapho utshala imali
Sizophakamisa abatshalizimali ukuthi bangathatha izixwayiso eziningana kusukela manje ukugwema isimanga emakethe yamasheya.
AmaGrifols, elinye inani elifaka inani lokukhuphuka kwamahhala
Ngenkathi isimo sezobuchwepheshe seGrifols sasisihle kakhulu, kunjalo nakakhulu kusukela kuleli sonto lapho lingena kwinani lokukhuphuka kwamahhala.
Ayini amanani wenani?
Ukutshala imali kwevelu, noma ukutshala imali ngevelu, kuyindlela yokutshala imali ehlala ikhiqiza inzuzo enhle esikhathini eside esizayo.
Ukuthatha ngobungani kweSwitzerland stock exchange kuya kuBME
Intengo esungulwe ye-Public Offering of Acquisition (OPA) yamasheya ku-BME ibilokhu ekugcineni ingama-euro angama-34 ngesabelo ngasinye.
Ezinye izimali zoqobo zokutshala imali
UBanco Santander ubuye abonakale njengomholi eSpain kwizimali zokutshala imali ezibhekele ezenhlalo (SRI), ngaphezulu kwe-66% yemali.
Amanani ayisithupha ukuqala ngo-2020
Akukho okungcono kunokuphakamisa ukuthi yimaphi amanani emakethe yamasheya aseSpain angenza kangcono kunezinye kusukela ngenyanga kaJanuwari
I-Naturhouse idlula ama-euro ama-2
Okwamanje, esinye sezitoko ezishisa kakhulu ezimakethe eziqhubekayo zaseSpain ngokungangabazeki yinkampani yemikhiqizo yokudla kweNaturhouse.
Kungani IAG izindaba kangaka?
IAG ukuvikeleka okuxhunyaniswe eduze kakhulu nokuvela kwentengo kawoyela ongahluziwe futhi leli qiniso lidala ukuthi ukungazinzi kwalo kube kukhulu kakhulu.
Kwenziwa kanjani ukubuyekezwa kwezakhi ze-Ibex 35?
Njengaminyaka yonke, izingxenye ze-Ibex zizobuyekezwa, njengeSacyr manje. Lapho ukungena nokuphuma kwamanani amasha kuzokwenzeka khona
Izingozi eziyisithupha ezingalimaza imakethe yamasheya ngo-6
Enye yezingcuphe ezingajezisa kakhulu izimakethe zezimali ukukhuphuka kwamazinga wenzalo endaweni ye-euro.
I-Bankia lapho ingena khona ezindleleni ezinkulu kakhulu
Okwamanje amasheya aseBankia adayisa cishe ama-euro angu-1,73, elinye lamazinga aphansi kakhulu eminyakeni yamuva.
Izinhlelo zempesheni ezisuselwa kuma-ETF
I-Bankinter imemezele ukwethulwa kwesithembiso esisha sezinhlelo zempesheni ezisuselwa kwizimali ezibalwe (i-Exchange Traded Funds noma i-ETF's, ngoba i-Bankinter yayo imemezele ukwethulwa kwesithembiso esisha sezinhlelo zempesheni ezincike kwizikhwama ezibalwe (i-Exchange Traded Funds noma i-ETF's, yi igama ngesiNgisi) ngoPopcoin, umphathi wakho wokutshala imali wedijithali
Ingabe izimakethe zamasheya zehlisa ukwehla komnotho?
Noma kunjalo, sekuvele kunemibiko ethile yezomnotho ekhuluma ngosuku lokuphelelwa yisikhathi ekuwohlokeni komnotho futhi lokhu kungowe-2021.
Ungakuthola kanjani ukubuyiselwa okungu-3% kuzimali ozitshalile?
Vele, ukubuyiselwa okungaguquki okungaba ngu-3% sekube yinkinga kubatshalizimali abancane nabaphakathi.
5 amafu amnyama alenga emakethe yamasheya aseSpain
Ngaphandle kokuthi imakethe yamasheya yaseSpain isengaphezulu kokusekelwa okubalulekile enamaphuzu angama-9.000, kukhona ubuthakathaka entengo yayo.
Abahlomuli nabahluliwe kuhulumeni ongakwesobunxele eSpain
Akekho emakethe yezimali engabaza ukuthi eminye imikhakha izohlomula kakhulu kuneminye uma kwenzeka kuvunyelwana ngohulumeni ongakwesobunxele.
Ungasebenza kanjani emakethe yamasheya yaseSpain ezinsukwini zokugcina zonyaka?
Okunye okufanele kusetshenziswe engxenyeni yokugcina yonyaka ukuthi kudinga ukwelashwa okuhluke kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izinyanga.
Izinzuzo nobubi bokuba uketshezi emakethe yamasheya
Isikweletu sisho ukuthi awukho kunoma yiluphi uhlobo lotshalo-mali, ezimakethe zemali engenayo ezingaguquguquki nasekuguqukeni.
Ukuphepha okuhweba cishe kuma-euro angama-100
Kuneqembu elikhethiwe kakhulu emakethe yamasheya elenziwe ngezibambiso ezidayisa eziseduze noma ezisondele kakhulu kuma-euro angama-100 ngesabelo ngasinye.
Amanani ayisithupha okufanele athule ngemakethe yamasheya ewayo
IRed Eléctrica ingelinye lama-classics akuleli qembu ngoba ngesinye seziphakamiso ezenziwa emakethe yamasheya ukuthi isebenza njengezindinganiso zokuphepha.
UDuro Felguera, ichicharro onezifiso
I-Duro Felguera iyisibambiso esinokuguquguquka okukhulu ngokweqile, ngoba okufanayo kungakhuphuka ngama-6% ngosuku olulodwa njengokukushiyela amaphesenti afanayo ngosuku olulandelayo.
Telefónica ngesikhathi seqiniso
ITelefónica ikhulisa ukukhula kwemali engenayo (+ 1,7% ebikiwe) uma iqhathaniswa nekota yesithathu yonyaka we-2018, ngenxa yokuthuthuka kweSpain, iBrazil kanye neJalimane.
Izinto ezi-6 ezizothonya imakethe yamasheya yaseSpain
Enye yezinto ezizonquma ukuvela kwezimakethe zamasheya zaseSpain ukuthi kungakhiwa uhulumeni ozinzile ezinsukwini ezizayo.
Imininingwane okumele abatshalizimali bayilungise kwezokuphepha
Kukhona olunye uchungechunge lwemininingwane ethile edinga isiko elikhulu lezezimali engxenyeni yabasebenzisi bemakethe yamasheya.
Imiphumela kaSantander yenze intengo yayo yehle emakethe yamasheya
Ukumenyezelwa kwemiphumela yebhizinisi ngekota yesibili yalo nyaka akuhlalanga kahle ekulinganisweni kwamasheya eBanco Santander.
I-repsol, i-Exxon ne-BP: amathuba amasha okuthenga?
I-Repsol isiqalile ukukhiqiza uwoyela eBuckskin, insimu esemanzini ajulile e-US Gulf of Mexico.
Ngabe ukwenyuka kwemali kufana kanjani?
Kunokukhuphuka kwemali enkulu kokunye ukuphepha kuncike kulokhu kuhamba enhlokodolobha yabo futhi lokho kungaletha izinzuzo.
I-Endesa ibheke kuma-euro angama-27
I-Endesa ibonge nakuleli hlobo elinzima, ngokukhuphuka kwama-4%, ngenkathi inkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya kazwelonke yehle yaya ku-6%.
ISpain, iNyakatho Melika noma i-European Stock Market?
Imakethe yamasheya yaseSpain iyimakethe esinayo kakhulu ezandleni zethu futhi sijwayelene kakhulu nezinkampani ezibhalwe emakethe kazwelonke eqhubekayo.
Amasu okwenza ukonga enze inzuzo ngo-2020
Esinye sezihluthulelo sokwenza ukonga kwakho kube nenzuzo kulele ekwehlukaniseni imali oyilondolozile ngokunakekelwa okukhethekile onyakeni onobungozi njengalona.
Ifa elashiywa nguMario Draghi
Kwanele ukukhumbula ukuthi ngenkathi uMario Draghi ethatha izinyathelo eziqinile futhi necebo lokukhuthaza elingenhla liphelelwe yisikhathi, umnotho we-Eurozone.